Petition | Text | Human Rights in Masoala
Petition | Text
Voasonia ity fitarainana ity!
Ramatoa Talen’ny valan-javaboaharim-pirenena Masoala,
ny Dina (lalàna hifampifehezana) eo amin’ny mponina ao amin’ny faritra tantanana sy arovana ao Marofototra na Zone d’occupation contrôlée (faribohitra Ambanizana ao amin’ny saikanosy Masoala);
ny fanaovan-tsonia io Dina io tamin’ny 24/09/2002, nataon’ny Talen’ny valanjavaboaharim-pirenena Masoala, ny solon-tena maro avy ao amin’ny fanjakana, ary ny Lehiben’ny fitsarana eto Maroantsetra;
ny tsy fahazoana mikasika io tany io na dia efa teo aza, ny famaritana eo anivon’ny valan-javaboaharim-pirenena Masoala sy ny faritra tantanana sy arovana ao Marofototra voalaza ao amin’ny Dina andalam-pizarana na andininy faha-4 ao amin’ny lalàna hifampifehezana.
Tsy azonay ekena:
ny famindrana ny famaritana eo anivon’ny valan-javaboaharim-pirenena Masoala sy ny faritra tantanana sy arovana ao Marofototra izay tsy mifanaraka amin’ny Dina izay natao indroa miantoana nanomboka ny 2002, ny farany tamin’ny 2013;
ny fampihenana tena ilaina ao amin‘ny tany azo trandrahana ho an’ny vahoaka izay niteraka ny famindrana ny famaritana ho iray tarika na iray zotra;
ny tsy fahampian’ny toerana azo trandrahana misy amin’izao fotoana izao ho an’ny vahoaka ao Marofototra ahazoany izay sakafo maharitra.
ny taratasy tamin’ny 14/09/2014 izay nalefan’ny mponina tao Marofototra ho an’ny Solombavam-Bahoakan’ i Madagasikara voafidy teto Maroantsetra, dia mbola tsy nahazoana valin’ny hatramin’izao;
ny fangatahana izay nalefan’ny mponina izay voalazan’ny mpitantana ny valanjavaboaharim-pirenena Masoala fa manaja tsara ny Dina 2002 sady nanamboatra ny famaritana araka ny lalàna 2002, ekena ary io ny famaritana tokana izay mety.
Noho ireo antony ireo, dia mangataka izahay:
valin’ny taratasy nalefan’ny mponina;
tokony ho voamarika tsara fa ny famaritana natao tamin’ny 2002 eo anivon’ny valanjavaboaharim-pirenena Masoala, ny faritra tantanana sy voaharo ao Marofototra, dia izy irery no azo ekena;
ka ny mpitondra eo anivon’ny valan-javaboaharim-pirenena Masoala dia tokony hanaja ny Dina izay niarahana tamin’ny vahoaka tao Marofototra;
ka ny famaritana eo anivon’ny valan-javaboaharim-pirenena Masoala sy faritra tantanana sy arovana ao Marofototra dia tsy maintsy haverina amin’ny famaritana tamin’ny 2002.